Diasporan Oromoo Kayyoo fi Feedhi Oromoo Tigireti Gurguruu Oromoo miti.
Feedhi dhunfati kayyoo koo hin gurgurina???
Manni abbaa keeti yoo alagaan saamamu atis waliin saami!! Waamicha Dabooroo OPDOn Oromoota Diyaaspooraaf Goote Maqaa guyyaa Oromoo diyyaspooraa jedhamun mootummaan naannoo Oromiyaa Oromoota mootummaa waayyaanee waggottan kurnan lamaan darban baqatanii biyyoota adda addaa keessa qubatani jiraatanif waamicha gochaa jira. Waamichi kun maqaan guyyaa Oromoo diyaaspooraa haa jedhamu malee Oromoo gochaa diinummaa mootummaan wayyaneen Uummata Oromoo irratti raawwachaa jirtu adunyaa irratti saaxilaa jiran tooftaa afaan ittin qabsissan baafatani akka ta`ee ifa galaadha, Gara biraatin warruma kalee biyya irraa ariátanii ammas ariáa jiran har`aa ammo deebisanii waamicha gochuun akkumattuu Oromoof ilaalcha akkami akka qabataa jiran namatti agarsiisa. Gama Oromoo waamichi godhameef hoo guyyaan kun dhugumatti guyyaa Oromoo diyaaspooraaf yaadamee kan saganteffame jedhanii yaadu laata?
Bara 2014 sababaa Mormii Maastar Plaanin wal-qabateen barattoota Oromoo rasaassan dhuman, kanneen madaawaan, kanneen mana hidhaatti guramanii fi mana barumasaa irraa ariyaman ni yaadanna. Irra jireessi Keenya gochaa sukannessaa kana morminee nyaata lagannee ala buluudhaan wareerree dura dhaabbanne. Dhugaa dhummtti akka nutti dhagahamu kan taasise biyyoota keessa jiraannu keessatti mirgi dhala namaa hagam akka kabajaa qabu keessa jirachaa waan ija keenyan arginuf illee ta`a. Sababaan barattoota Oromoo irra waregamni fi gaagga`amni kana fakkaatu irra gaheef motummaan alagaa kan ilmaan Tigreen bocamee gara jabinaan qotee bulaa Oromoo lafa isaa irraa buqisee kadhattuu taasisuun bulchoitoonni Wayyaanee Ofi isaaniti itti sooromanii qabeenyaa haagas hin jedhamne saamanii qarshii haaga Taankarii Bishaan itti kufamu kessatti kufachaa jiraatan mormudhan gaagaáman Keesumma Oromoonni biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa keessa jiraatan dhalli namaa hagam kabajaa namummaa, mirga waan barbaadan gaafachuu hagam akka ta`e keessa jiraachun argaa jiran waan ta`eef walitti himuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Duba baratoonni Oromoo dhiignii isaani gaaffi mirgaa qofaa waan gaafatanif jecha dhangala`ee yoom qooreeti kabaja guyyaa maqaa Oromoo diyasporaatin qophaahe kana irraa qooda fudhachuuf akkamin waamicha isaanii simannaa?
Makmaaksi Oromoo akka jedhe “Re`ee takka yoo qalan ishin hafte alala guurti” jedha. Dhugaadhaa OPDO ilmaan Oromoo fuula isaanii duraatti loltuun Wayyaanee Agaazin baraattoota Oromoo rasaassan mataa mataa isaanii keessa reeban dhaabbatanii ilaaluu bira darbani maqaa gooleesitoota jedhuun adda durummaan itti maxxansuuf figuu mitti? Isiin ille warri waamicha kana simattani qooda irraa fudhattanii fi fudhachuuf deemtan gochaa OPDOn maqaa Oromootin gootu kanaan ala miti. Akkuman jalqaba irratti tuquu yaale akeekni sagantaa kanaa Oromoota biyya ambaatti wayyanne saaxilaa jiran afaan qabsisuuf toftaa karoorfamee lafa karee meetira 100 hin gunne itti keennan afaan qabsisuu dha. Sana bira darbee ammoo mormi Mastar plaani biyya keessa barattoonni fi uummanni Oromoo itti jiru kana bakka dhabsisuuf akka ta`e ifa galadha. Dhugaa dha namuu biyya abbaa isaa irratti qabeenyaa qabachuu ni fedha.
Haat`utti Oromoota haar`a biyyatti affeeramaa jiran akka qabeenya biyya keestti qabaatuu barbaadamee otuu hin taane saamicha itti jiran kana Oromoon akka qodaa irra qabu fi fudhachaa jiru fakkeesuf. Fkn yeroo karaan baaburaa magaalaa Finfinnee keessaa bahu warra karaan sun mana isaanii irra bahee digsissanii magaalaa qarqara lafa Oromoo kennanif keessaa dhibbantaan 75 warra manni irraa digame otuu hin tanne, dabballoota Wayyannee fi ilmaan Tigraayif maqaa kanaan qodameef. kan nama ajaa`ibu warreen dhibbantaa 75 oli taán kun kartaa lama sadi akka fudhatantu himama. Oromoon tokko tokko alagaan yoo biyya Keenya irratti sooromu nuti Oromoon calisnnee ilaaluu irra nutillee haaga isaan nuuf qodan qoddannee, karaa caabxeen haa yaatuu jechuun fayyaalesummaa kana duba warri jiran ille hinuma jiru. Haata`utti kana hunda dura Uummanni Keenya lafa sana irratti dhalatee eessa jiraa, inn ammaan boodaa dhalatu hoo eessa dhaqa? kan jedhuuf deebbi gahaa qabaachuun namarra jiraata.
Yaada koo xumuruuf, abboottin Keenya kalleesaa gaafa ilma dhalchan bakka koo bu`ee maqaa koo waamsisaa, ana caalaa beeka ta`a, qe`ee koo guudsaa jedhee abdii irra kaayyata. Egaa Oromiyaan saamamaa jiraachuu ishii OPDOn ifatti hubatti. Gooftoolin isaani humnaan dirqisiisanii waan barbaadan hunda raawwachisaa akka jiranis beekamaa dha. Bobbaan oromoota diyaspooraa irratti godhamu kuns qaama dirqamnii itti kenname keessaa isa tokko. OPDOn har`aa abdii abban ilma isaa irraa qabaatu sana faallesitee qe`ee Abbaa ishi ilmaan Tigraayin samisisaa jirtti. Kan alagaan saamsisaa jirtu irra siilaa saaminsa alagaa kana ofirraa dhaabsifna jedhanii waamicha ilmaa oromooti gochuun otuu irra jiru isaan garuu ilmaan Oromoo afaan faajjessaa jiru.
“QEÈEN ABBAA SAAMAMAA JIRAA KOOTAA WALIN SAAMNAA” Waamicha Dabooroo oromootaaf goochaa jirti. Oromoon diyaaspooraa deebin inni kenuu qabu Tigreen nurraa haadhabatuu dhigni ilamaan Oromoo dhangala`ee gumaan haa kaffalamu warri nu ajjeese dura seeran mana murtitti haa dhihaatan gaaffii jedhu ta`uu qaba jechaa holola tokkummaa keenya diiguf nutti aggaamate kana dura dhaabbachaa meeshaa diinaa taúu jalaa Waaqayyo nu haa baraarun jedha.
Malkaa Milkii tiin
N.B. Duran durse Malkaa Milkii yadaa yeeroo isaa egatee kana nu erguu keeti galatomi. Uni ilee Diaspora Oromoo Kaleessa maqa ABO fi Maqa QBO Oromoon iyyatee ragga Oromummaa fi Qabsa’umma fudhate itti waraqa jieenya fi jiruuf jireenya garii biyya Demokratawwa ta’ee USA fi Europa utuu naggan jiratuu, Maqa Qabsoo fi Qabsa’oota kaleessa dhadannoo goodhate ittin jireenya argate xureesuu fi diinati dabarsitee lachuun kee yoomi ilee samuu keef nagga hin keenuu. QBO lubun meeqa itti wareegamee fi Baratoon Oromoo itti du’aa jira akkasumas WBO itti beela’aa jiruu, diinaf saxiluun 40% gatii ticketa xiyyara bilisa argachuuf kayyoo fi feedhi uumataa Oromoo Tigireti gurgurachuun salphina. Yakka kana booda maqa Oromoo fi Oromummaan dubachuu hafee Oromoo harka qabuuf mirga hin qabdan.